Micro Managing??? - Business Centric Network (BCN)
May 20, 2018 May 20, 2018 San Thida
Micro Managing လား???
ဒူဘိုင်းရဲ့ စော်ဘွားကြီးဟာ အမျှော်အမြင်ကြီးလှပါတယ်။ တစ်နေ့ သူ့ရဲ့ အစိုးရအရာရှိကြီးတွေကို အခမ်းအနားနဲ့ဖိတ်ပြီး လမ်းညွှန်ချက်ပေးခဲ့ပါတည်။ သူ့ရဲ့ အစိုးရလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ paperless ဖြစ်တဲ့ Smart Government ဖြစ်အောင် ခိုင်းစေပါတယ်။ ထပ်ပြောလိုက်သေးတယ်။ ၂ နှစ်ပြည့်လို့မှ အကောင်အထည်မပေါ်ရင်တော့ မင်းတို့ကို အငြိမ်းစားယူပွဲလေး လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ ခပ်ပြုံးပြုံးလေးပြောလိုက်ပေမယ့် အတည်ပြောနေတာဆိုတာ အရမ်းသိသာပါတယ်။
နောက်နေ့တွေမှာ ဌာနပေါင်းစုံက လူကြီးတွေက သတင်းစာတွေထဲမှာ ဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်နဲ့ ဆင်ဖမ်းမယ် ကျားဖမ်းမယ်တွေလုပ်ကြတာပေါ့။ စော်ဘွားကြီးက ဘာမှ မပြောသေးဘူး။ ကြည့်နေတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လူတွေက သွေးအေးလာပြီး paperless Smart Government အိပ်မက်က natural death ဖြစ်သွားပါတယ်။ သိပ်မပြောကြပါဘူး။
ဒီအခါမှာ စော်ဘွားကြီးက လူတွေသွေးအေးသွားတာကို သတိထားမိတယ်။ ဒီအချိန်မှာ သူက ဒေါသတွေ ထွက်ပြီး memo တွေထုတ်ပြီး ကျိန်းဝါးတာမျိုးတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် project data တွေကို live မြင်ရအောင် dashboard တွေ လုပ်ခိုင်းပြီး စစ်ဆေးတာမျိူးတွေ လုပ်လို့ရပါတယ်။ တခြားလုပ်လို့ရတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဒါတွေကို မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။
သူလုပ်ခဲ့တာက သူ့ကားကို သူမောင်းပြီး မြေစာရင်းဌာနကို မောင်းသွားပါတယ်။ မြေစာရင်းဌာနရောက်တော့ receptionist ကို Archive Section ဘယ်မှာလဲလို့မေးပါတယ်။ receptionist လဲ အရမ်းအံ့သြပြီး Archive Section ကိုလမ်းညွှန်လိုက်ပါတယ်။
ပြီးတာနဲ့ မြေစာရင်းဌာနရဲ့ လူကြီးတွေ ဖုန်းဆက်ပါတော့တယ်။ ဒီအခါမှာ လူကြီးတွေလည်း အူယားဖားယားနဲ့အပြေးအလွှား Archive Section ကိုပြေးကြပါတယ်။ သူတို့မရောက်ခင်မှာပဲ စော်ဘွားကြီးက စာရေးလေးကို မင်းတို့ဒီမှာ စာရွက်တွေသုံးလားလို့ မေးလိုက်ပါတယ်။ စာရေးလဲ ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ သုံးပါတယ်လို့ ဖြေလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ စော်ဘွားကြီးက ဘာတစ်ခွန်းမှ ထပ်မပြောတော့ပဲ လှည်ထွက်သွားပါတယ်။
မြေစာရင်းဌာနရဲ့ လူကြီးတွေလည်း လန့်ဖြန့်ကုန်ပြီး သွေးအေးနေတဲ့ စီမံကိန်းတွေကို ထပြီး အကောင်အထည်ပြန်ဖေါ်ကြပါတော့တယ်။ အခြား အစိုးရဌာနတွေလည်း သတင်းကြားပြီး အကုန်ပြန်ပြီး အသက်ဝင်လာကြပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ၄ လပြည့်တဲ့အခါမှာ အရင်တစ်ခါကလိုပဲ ဘာမှ ကြိုမပြောပဲ အဲ့ဒီ မြေစာရင်း ဌာနကို စော်ဘွားကြီး ထပ်ပြီး သွားခဲ့ပါတယ်။ receptionist ကလည်း ထုံးစံအတိုင်း လူကြီးတွေကို အကြောင်းကြား၊ အားလုံးက အသေအလဲ ပြေးလာကြပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ စော်ဘွာကြီးက စာရေးကို paper သုံးလားလို့ မေးပြီးသွားပြီးပြီလေ။ ဒါမယ့် ဒီအခါမှာ စာရေးက paper မသုံးတော့ပါဘူးလို့ ဖြေလိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ စော်ဘွားကြီးကနေ ခုနကရောက်လာတဲ့ လူကြီးတွေဖက်လှည့်ပြီး great job! ဆိုပြီး ချီးမွမ်းလိုက်ပါတယ်။
ဒီအခါမှာ စော်ဘွားကြီးက micro manage လုပ်တယ်၊ နေရာတကာမှာ ဝင်ပါတယ်လို့ပြောစရာရှိပါတယ်။ တကယ့်တော့သူဟာ micro manage လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ သူကနေ ဘယ်အစိုးရလူကြီးတွေကိုမှ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ဝင်မညွှန်ကြားခဲ့ပါဘူး။ သူ့ဖြစ်ချင်တဲ့ vision ကိုပဲ ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် micro management လို့ပြောလို့မရပါဘူး။
သူတကယ်လုပ်ခဲ့တာက micro monitoring ပါ။ လူတွေဟာ နောက်နေ follow-up မလုပ်ပဲပစ်ထားလိုက်ရင် ငါတို့လူကြီးက ကြုံလို့ပြောလိုက်တာ၊ serious မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီး သွေးအေးရပ်ဆိုင်းသွားတက်တဲ့ သဘောကို နားလည်ပြီး သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ moicro monitor လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းအရာလေးကို စဉ်းစားကြည့်မိရင် ခေါင်းဆောင်တွေဟာ micro management တွေနဲ့ နေရာတကာဂဝင်ရှုပ် မနေသင့်ပဲ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကို သူတို့အလုပ် သူတို့လုပ်စေဖို့ follow-up လုပ်တာကို လိုချင်တဲ့ ရလဒ်ရတဲ့အထိ follow- through လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ micro managing ကိုရှောင်လို့ micro monitoring လုပ်ကိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဝေငှလိုက်ရပါတယ်။
credit to KC Myanmar
ဒူဘိုငျးရဲ့ စျောဘှားကွီးဟာ အမြှျောအမွငျကွီးလှပါတယျ။ တဈနေ့ သူ့ရဲ့ အစိုးရအရာရှိကွီးတှကေို အခမျးအနားနဲ့ဖိတျပွီး လမျးညှနျခကျြပေးခဲ့ပါတညျ။ သူ့ရဲ့ အစိုးရလုပျငနျးစဉျတှမှော paperless ဖွဈတဲ့ Smart Government ဖွဈအောငျ ခိုငျးစပေါတယျ။ ထပျပွောလိုကျသေးတယျ။ ၂ နှဈပွညျ့လို့မှ အကောငျအထညျမပျေါရငျတော့ မငျးတို့ကို အငွိမျးစားယူပှဲလေး လုပျပေးမယျလို့ပွောလိုကျပါတယျ။ ခပျပွုံးပွုံးလေးပွောလိုကျပမေယျ့ အတညျပွောနတောဆိုတာ အရမျးသိသာပါတယျ။
နောကျနတှေ့မှော ဌာနပေါငျးစုံက လူကွီးတှကေ သတငျးစာတှထေဲမှာ ဘာလုပျမယျညာလုပျမယျနဲ့ ဆငျဖမျးမယျ ကြားဖမျးမယျတှလေုပျကွတာပေါ့။ စျောဘှားကွီးက ဘာမှ မပွောသေးဘူး။ ကွညျ့နတေယျ။ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ လူတှကေ သှေးအေးလာပွီး paperless Smart Government အိပျမကျက natural death ဖွဈသှားပါတယျ။ သိပျမပွောကွပါဘူး။
ဒီအခါမှာ စျောဘှားကွီးက လူတှသှေေးအေးသှားတာကို သတိထားမိတယျ။ ဒီအခြိနျမှာ သူက ဒေါသတှေ ထှကျပွီး memo တှထေုတျပွီး ကြိနျးဝါးတာမြိုးတှေ၊ ဒါမှမဟုတျ project data တှကေို live မွငျရအောငျ dashboard တှေ လုပျခိုငျးပွီး စဈဆေးတာမြိူးတှေ လုပျလို့ရပါတယျ။ တခွားလုပျလို့ရတာတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူဒါတှကေို မလုပျခဲ့ပါဘူး။
သူလုပျခဲ့တာက သူ့ကားကို သူမောငျးပွီး မွစောရငျးဌာနကို မောငျးသှားပါတယျ။ မွစောရငျးဌာနရောကျတော့ receptionist ကို Archive Section ဘယျမှာလဲလို့မေးပါတယျ။ receptionist လဲ အရမျးအံ့သွပွီး Archive Section ကိုလမျးညှနျလိုကျပါတယျ။
ပွီးတာနဲ့ မွစောရငျးဌာနရဲ့ လူကွီးတှေ ဖုနျးဆကျပါတော့တယျ။ ဒီအခါမှာ လူကွီးတှလေညျး အူယားဖားယားနဲ့အပွေးအလှား Archive Section ကိုပွေးကွပါတယျ။ သူတို့မရောကျခငျမှာပဲ စျောဘှားကွီးက စာရေးလေးကို မငျးတို့ဒီမှာ စာရှကျတှသေုံးလားလို့ မေးလိုကျပါတယျ။ စာရေးလဲ ကွောငျတောငျတောငျနဲ့ သုံးပါတယျလို့ ဖွလေိုကျပါတယျ။ ဒီတော့ စျောဘှားကွီးက ဘာတဈခှနျးမှ ထပျမပွောတော့ပဲ လှညျထှကျသှားပါတယျ။
မွစောရငျးဌာနရဲ့ လူကွီးတှလေညျး လနျ့ဖွနျ့ကုနျပွီး သှေးအေးနတေဲ့ စီမံကိနျးတှကေို ထပွီး အကောငျအထညျပွနျဖျေါကွပါတော့တယျ။ အခွား အစိုးရဌာနတှလေညျး သတငျးကွားပွီး အကုနျပွနျပွီး အသကျဝငျလာကွပါတော့တယျ။
ဒီလိုနဲ့ ၄ လပွညျ့တဲ့အခါမှာ အရငျတဈခါကလိုပဲ ဘာမှ ကွိုမပွောပဲ အဲ့ဒီ မွစောရငျး ဌာနကို စျောဘှားကွီး ထပျပွီး သှားခဲ့ပါတယျ။ receptionist ကလညျး ထုံးစံအတိုငျး လူကွီးတှကေို အကွောငျးကွား၊ အားလုံးက အသအေလဲ ပွေးလာကွပါတယျ။ ဒီအခြိနျမှာ စျောဘှာကွီးက စာရေးကို paper သုံးလားလို့ မေးပွီးသှားပွီးပွီလေ။ ဒါမယျ့ ဒီအခါမှာ စာရေးက paper မသုံးတော့ပါဘူးလို့ ဖွလေိုကျနိုငျပါတယျ။ ဒီအခါမှာ စျောဘှားကွီးကနေ ခုနကရောကျလာတဲ့ လူကွီးတှဖေကျလှညျ့ပွီး great job! ဆိုပွီး ခြီးမှမျးလိုကျပါတယျ။
ဒီအခါမှာ စျောဘှားကွီးက micro manage လုပျတယျ၊ နရောတကာမှာ ဝငျပါတယျလို့ပွောစရာရှိပါတယျ။ တကယျ့တော့သူဟာ micro manage လုပျခဲ့တာမဟုတျပါဘူး။ သူကနေ ဘယျအစိုးရလူကွီးတှကေိုမှ ဘယျလိုလုပျရမယျဆိုတာကို ဝငျမညှနျကွားခဲ့ပါဘူး။ သူ့ဖွဈခငျြတဲ့ vision ကိုပဲ ပွောခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ micro management လို့ပွောလို့မရပါဘူး။
သူတကယျလုပျခဲ့တာက micro monitoring ပါ။ လူတှဟော နောကျနေ follow-up မလုပျပဲပဈထားလိုကျရငျ ငါတို့လူကွီးက ကွုံလို့ပွောလိုကျတာ၊ serious မဟုတျပါဘူးဆိုပွီး သှေးအေးရပျဆိုငျးသှားတကျတဲ့ သဘောကို နားလညျပွီး သူ့နညျးသူ့ဟနျနဲ့ moicro monitor လုပျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒီအကွောငျးအရာလေးကို စဉျးစားကွညျ့မိရငျ ခေါငျးဆောငျတှဟော micro management တှနေဲ့ နရောတကာဂဝငျရှုပျ မနသေငျ့ပဲ သကျဆိုငျရာတာဝနျရှိသူတှကေို သူတို့အလုပျ သူတို့လုပျစဖေို့ follow-up လုပျတာကို လိုခငျြတဲ့ ရလဒျရတဲ့အထိ follow- through လုပျရမှာဖွဈပါတယျ။ micro managing ကိုရှောငျလို့ micro monitoring လုပျကိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဝငှေလိုကျရပါတယျ။
Previous postEducation Policy Changes
Next postဖောင်စီးရင်းရေငတ် ဖောငျစီးရငျးရငေတျ